I-Shotfarm: Inethiwekhi Yokuqukethwe Yomkhiqizo yama-Brands and Manufacturers | Martech Zone
I-Shotfarm: Inethiwekhi Yokuqukethwe Yomkhiqizo yama-Brands and Manufacturers
NgoLwesibili, ngoJuni 30, i-2015 NgoLwesibili, ngoJulayi 7, i-2015 Douglas Karr
Esinye sezifundo eziningi engisifunde ngenkathi ngise-IRCE ukuthi, kumikhiqizo nabakhiqizi, i-ecommerce yayingeyona zabo online commerce store njengoba kwakumayelana nezitolo ezisezansi ezazikwazi ukuthengisa nokusabalalisa izimpahla zazo egameni lazo.
Njengoba izitolo ze-ecommerce zakha futhi zikhuthaza ubudlelwano obuvelele namakhasimende abo, bangabheka kweminye imikhiqizo nabakhiqizi ukukhulisa uhlu lwabo lwezimpahla abazoluthengisela amakhasimende abo. Kepha ukuthengisa izimpahla eziningi, bazokwazi ukuthola okuqukethwe okuhlobene nomkhiqizo ukuze bashicilele imikhiqizo kungxenyekazi yabo ye-e-commerce.
Inethiwekhi Yokuqukethwe Yomkhiqizo weShotfarm iyinkundla eyamukelwa kabanzi yokwabelana, ukuguqulwa, ukuphathwa kanye nokusatshalaliswa kokuqukethwe komkhiqizo. Indawo eshishwayo esanda kukhishwa yeShotfarm ivumela abathengisi ukuthi bashintshe okuqukethwe komkhiqizo nganoma iyiphi indlela ngaphandle kwesenzo esengeziwe nabakhiqizi ukuthi bagxile kwikhwalithi yokuqukethwe kwabo kunokusatshalaliswa kwakho.
Okwezimpawu nabakhiqizi - Isibhamu ikuvumela ukuthi ugcine, uphathe futhi wabelane ngamafayela ezinkulungwane zanoma yiluphi uhlobo kanye nezimpawu ezibalulekile nganoma iyiphi inombolo yabalingani bangaphakathi nabangaphandle ngaphandle kwenkokhiso. Uma kuvela isidingo, khetha ezintweni ezingeziwe ezifana nelabhulali enophawu lokungena ngemvume kwangasese, isitoreji esingeziwe, izinkambu zemfanelo ezingenamkhawulo nemephu yezimpawu zozakwethu, nezinye izici ezithuthukile ze-DAM / MDM zonke ezingeni elithengekayo.
Kwabathengisi nabasabalalisi - IsibhamuINethiwekhi Yomkhiqizo Wamahhala ibeka ingosi yomthengisi yezigidi eziningi ezandleni zakho ngokubeka phambili inqubo yokuqoqa okuqukethwe kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme evunyelwe, ephezulu kakhulu kunoma iyiphi inamba yabahlinzeki.
Abakhiqizi, imikhiqizo, abathengisi nabasabalalisi abangaphezu kuka-10,000 XNUMX basebenzisa iShotfarm. Muva nje, Isibhamu umemezele ukusebenzisana no inRiver, Ukuphathwa kolwazi lomkhiqizo okuhola (PIM). IShotfarm switchch izohlanganiswa nesoftware ye-inRiver yebhizinisi PIM ukunika amandla ukushintshaniswa kwedatha yomkhiqizo phakathi kwamakhasimende we-inRiver's yokukhiqiza, ukusabalalisa kanye nokuthengisa kabusha.
Tags: brandinethiwekhi yokuqukethwe komkhiqizoCommerceezokuhweba ngekhompyuthai-pim yebhizinisiumfulaircenomakhiinethiwekhi yokuqukethwe komkhiqizo womkhiqizipininethiwekhi yokuqukethwe komkhiqizoukuphathwa kolwazi lomkhiqizotekutsengisaisibhamuisibhamu switch
I-UsabilityHub: Nikeza futhi Uthole Impendulo Yedizayini noma Yokusebenziseka